Ngwunye Ngwunye Ngwunye Ngwá Ọrụ-HLQ na-ekpo ọkụ
Mgba aghara na-egbuke egbuke ọkpọ ígwè na dayameta nke 14mm, 16mm, na 42mm (0.55 ", 0.63", na 1.65 "). Ogologo 50mm (2 ″) nke tube dị ọkụ nke ukwuu na 900 Celsius C (1650 ° F) n'okpuru 30 sekọnd.
DW-UHF-6KW-III igwe eji etinye aka n’ọkụ
• Ngwongwo ígwè nwere ODs: 14mm, 16mm na 42mm (0.55 ", 0.63", na 1.65 ")
• Mgbidi nke mgbidi: 1mm, 2mm, na 2mm (0.04 ″, 0.08 ″, 0.08 ″)
Ike: 5 kW maka ọkpọ 42mm, 3 kW maka 14 na 16 mm tubes
Okpomoku: 1740 ° F (950 ° C)
Oge: 26 sek.
Tinye eriri igwe n'ime eriri igwe.
Tinye ọkụ ọkụ maka sekọnd 26.
Wepu ọkpọkọ ahụ site na eriri igwe.
Achọpụtara okpomọkụ a na-achọsi ike maka ihe na-erughị 30 sekọnd maka atọ nchara ígwè atọ. Enwere ike iji sistemu ntinye nke 5 kW mee ihe maka ịga nke ọma na-ebuchapụta tubes nchara nwere diameters na ọkpụrụkpụ dị iche iche.
Categories Technologies Tags zụọ preheater, induction preheater, itinye n'ọkwa preheater price, nkwalite ịmalite ịmalite, igwe onu ahia ndi mmadu, usoro nkpuchi mmeghe, induction preheating tubes, preheating ígwè, preheating akpa, ígwè ọkpọkọ Mail igodo